Nuqul oo dhaji aan ka shaqeynaynin Mac? Waxaan ku barinaa inaad xalliso | Waxaan ka socdaa mac
Nidaamka qalliinka ee Mac-da waa mid ka mid ah kuwa ugu xasilloon. Si kastaba ha noqotee, ma jiro nidaam nacas ah. Intaa waxaa dheer, haddii aad si joogto ah ugu cusbooneysiiso nooca ugu dambeeya, waxaa suurtagal ah in kuwan cillad-darrooyinka suurtagalka ah si toos ah loo saxo markii aad dib u rakibto qaybtaas oo khaladaad ku jiraan.
Mid ka mid ah guul darrooyinka xoogaa fudud, laakiin taasi way na dhibaysaa, waa qufulka koobiga iyo dhejinta shaqadaSidaa darteed, ku celcelinta isticmaale kasta, u isticmaal shaqadan maalin kasta. Haddii ay kugu guuldareysatay munaasabad kasta, waxaan ku tusi doonaa sida ugu dhakhsaha badan ee loo xaliyo iyo laba siyaabood oo kala duwan, sidaa darteed waxaad dooran kartaa midka kuugu fudud.
Waxa inala gudboon waa dib u bilaw muuqaalkan, taas oo ah, ku qasba inay xirto oo mar kale furto. Ficilkani wuxuu xalliyaa ku dhowaad dhammaan boodhadhka xayiran ama dhibaatooyinka kale.
1 Xulashada 1aad: Iyadoo lala socdo Kormeerka Waxqabadka.
2 Xulashada 2aad: Iyada oo loo marayo Terminalka.
Xulashada 1aad: Iyadoo lala socdo Kormeerka Waxqabadka.
Xaaladdan oo kale, waxaan u tagi doonaa kormeeraha waxqabadka, kaas oo ku yaal gudaha galka codsiyada:
Laga soo bilaabo Finder, Jidka soo socda: Codsiyada / Adeegyada, ama,
Laga soo bilaabo Barta bartamaha, ku helitaanka: Taliska + Barxadda iyo qorista Kormeerka Waxqabadka.
Marka la furo, sanduuqa raadinta ee midigta sare, waa inaan qorno: sabuurad
Xulo xulashada sabuuradda oo guji X, oo ku yaal bidixda kore.
Ikhtiyaar ayaa soo muuqan doona, oo nooga digaya haddii aan dooneyno inaan joojino hawsha. Waan gujin doonaa "Bixitaan xoog ah"
Hadda waan awoodnaa xiro kormeeraha dhaqdhaqaaqa.
Shaqadu si toos ah ayey u xirmaysaa oo dib u fureysaa. Waxay la mid tahay dib-u-dhiska nidaamka, laakiin shaqadaas ayaa si gaar ah u shaqeysa. Hadda tijaabi haddii "nuqul iyo dhejis" shaqadu si sax ah u shaqeyneyso.
Xulashada 2aad: Iyada oo loo marayo Terminalka.
Munaasabadan, waxaan ku celin doonaa talaabada ugu horeysa ee ikhtiyaari hore, laakiin markan, waxaan ku eegaynaa galka codsiyada ama Astaamaha barnaamijka: terminal.
Marka la furo, waxaan qornaa: khaanad killall.
Hadda waan awoodnaa ka bixitaanka Terminal
Labadan ikhtiyaar midkood ha hagaajiyo dhibaatada. Haddii kale, dib u bilow.
Muuqaalkaani kuma eka macOS High SierraSidaa darteed, waad ku dhaqmi kartaa xitaa haddii aad leedahay macOS hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Nuqul oo dhaji aan ka shaqeynaynin Mac? Waxaan ku barinaa inaad xalliso
Tan iyo cusbooneysiintii ugu dambeysay ee la arkay, nuqulka / dhajiska ayaa iga joojiyay shaqadeyda. Waxaan isku dayay labada hab ee aad sheegaysid .. laakiin aniga ima shaqeynayo. Ma garanayo haddii aad wax ka ogtahay arrinta sababta cusboonaysiintaas ugu dambaysay ay u joojisay inay shaqeyso. Haddii ay jirto wado kale, waan ku qanacsanahay.
Labadaa ikhtiyaar midkoodna aniga ima shaqeynayo sidoo kale
Nuqul - dhajinta ma ii shaqeyso aniga sidoo kale ... Waxaan isku dayay wixii aan qoray oo haba yaraatee waxba kama jiraan, amarradan waxaan u adeegsadaa shaqo maalintayda maalinba maalinta ka dambaysa waxayna isiinayaan dhibaatooyin badan ....
Waad salaaman tihiin, nuqullada iyo amarrada dhajiska ah ee cusboonaysiintii ugu dambaysay aniga sidoo kale ima shaqeeyaan Xal ma u heshay tan?
Jawaab Belén Furtado
Waad salaaman tihiin, ima siinayo talaabooyinkan, dhowr jeer ayaan isku dayay waxna ma ahan ... CAAWIMAAD maalintii oo dhan ma doonayo inuu i garaaco ama wax kale 🙁
Ku jawaab Liset
Juan Carlos Villalobos muuqaalka booska dijo
Mid kasta! Ma shaqeyneyso.
Jawaab Juan Carlos Villalobos
Wadarta indheer garadka! Waan qasbay oo markiiba way shaqeysay! wadar mahadsanid
Tiirarka Dunida, ciyaar kale oo u timaadda isticmaaleyaasha Mac